हाम्रो लागि लेख्न | WikiWon
अब तपाईं यस ब्लग मा हाम्रो लागि लेख्न सक्छ. अतिथि पोस्ट आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग लिङ्क फिर्ता प्राप्त गर्न मदत गर्न सक्छ. मलाई थाहा जो कोहीले राम्ररी प्रतिष्ठित लिङ्क जोडिएको प्राप्त गर्न चाहन्छ. यो ब्लग राम्रो दिन दिन बढ्दै छ. हाम्रो आगंतुकों अद्यावधिक प्राप्त गर्न फेरि भ्रमण गर्न यो ब्लग र सम्भवत मा साझा सामग्री मा भरोसा. यो ब्लग मा के सामग्री साझेदारी गरिएको छ, सबै भन्दा पहिले, म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु? यो वेबसाइट साझेदारी गरिएको छ सबै सामग्री अद्वितीय र मूल छ.
मेरो नवीनतम हेर्नुहोस्
प्रविधी ब्लगिंग र धेरै सम्बन्धित. यो ब्लग यसको आफ्नै मंच छ. तिमी मेरो मंच मा पोस्ट द्वारा पनि फिर्ता लिंक प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं यस ब्लग संग जोडिएको प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त. त्यसपछि तिमी सिर्फ एक अद्वितीय र मौलिक सामग्री आवश्यक.
तपाईं फिर्ता के प्राप्त गर्न सक्छन्
तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा लिंक फिर्ता प्राप्त गर्न सक्छन्.
तपाईं थप शुद्ध र आला यातायात प्राप्त गर्न सक्छन्.
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे तपाईं र तपाईंको ब्लग को बाहिर आफ्नो ब्लग बारे थाहा हुनेछ. त्यसैले आफ्नो पहिचान वृद्धि हुनेछ.
तपाईं आफ्नो अतिथि पोस्ट कसरी पेस गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं प्रति मेरो विषय रूपमा लेख लेख्न गर्नुपर्छ,
हामी आफ्नो प्रोफाइल समीक्षा र तदनुसार आफ्नो खाता अद्यावधिक हुनेछ. अनुमोदन पछि, तपाईं आफ्नो अतिथि पोस्ट लेख्न सक्छ. हामी आफ्नो पोस्ट समीक्षा र भित्र प्रकाशित हुनेछ 72 घण्टा. अन्यथा, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
एक अतिथि पोस्ट पोस्ट गर्दै लागि नियम
तपाईंको सामग्री मूल हुनुपर्छ र अर्को वेबसाइट बाट प्रतिलिपि हुँदैन.
तपाईंको अतिथि पोस्ट को एक न्यूनतम हुनुपर्छ 450 शब्द.
जब हामी यो वेबसाइट तपाईंको सामग्री हटाउन सक्नुहुन्छ?\_
तपाईंले यो पृष्ठमा लेखिएको नियम तोड्न थिएन सम्म हामी तपाईंको लिंक र पोस्ट हटाउने. हामी केही अवस्थामा हाम्रो वेबसाइट तपाईंको सामग्री हटाउने अधिकार छ. ध्यान दिएर पढ्न कृपया.
यदि तपाईंको सामग्री कुनै पनि अन्य वेबसाइटमा फेला यो हाम्रो वेबसाइट मा प्रकाशित अघि.
तपाईं भित्र आफ्नो टिप्पणी गर्न जवाफ दिनुभयो भने4दिन.
माथि-उल्लेख विभाग फस्न गर्दैन अन्य कुनै पनि वेबसाइटमा आफ्नो लिंक तपाईं परिवर्तन भने / परिमार्जन.
फेरि पढ्न कृपया यदि कुनै अन्य नियम कार्यान्वयन.